वैज्ञानिक महावीर पुनलाई, अमेरिकाका दुई मेयरले सम्मान गरे! – Purba Aawaj
वैज्ञानिक महावीर पुनलाई, अमेरिकाका दुई मेयरले सम्मान गरे!
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आषाढ २५, २०७८ समय: ७:२८:०५
काम गरेको भन्दै उनलाई ओहियो शहरका दुई मेयरले सम्मान गरेका हुन् ।
थप समाचार – अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गुगल, ट्विटर र फेसबुकविरुद्ध मु,द्दा दा,यर गरेका छन्। आफू सेन्सरशीपबाट पीडित भएको दाबी गर्दै उनले ती कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई पनि विपक्षी बनाएर मुद्धा दर्ता गरेका छन् ।
उनले भने, हामीहरू नक्कली प्रतिबन्ध, चुप लगाउनेहरूलाई रोक्ने र कालो सूचीमा राख्ने र गालीगलौज गर्ने कामको अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छौँ, तपाईँहरूलाई त्यो सबै राम्ररी थाहा छ। मुद्दामा आरोपित सेन्सरशीप
रोक्न अदालतको आदेश माग गरिएको छ ट्रम्पले यदि उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई प्रतिब,न्ध लगाउन सक्छन् भने जोसुकैलाई त्यसो गर्न सक्छन भनेका छन्। फ्लोरिडास्थित सङ्घीय अदा,लतमा दा,यर गरिएको मु,द्दाप्रति लक्षि,त कुनै पनि प्रविधि कम्पनीहरूले प्रतिक्रि,या नदिएको बीबीसीले लेखेको छ ।
सामाजिक सञ्जालबाट नि,लम्ब,नमा परेपछि ट्रम्पले आफ्ना कुरा शेयर गर्न पाएका छैनन् । आफ्ना कुराहरु जनतामाझ पुर्याउनको निम्ती उनले आफ्नो वेभसाइट पनि बनाएका थिए । तर पछि त्यो पनि बन्द गरेका थिए । source point nepal
Last Updated on: July 9th, 2021 at 7:28 am